Himalaya Dainik » अभिनेत्री नीता ढुंगाना ज्योतिष हरिहरको प्रेममा चुर्लुम्मः डेटिङका लागि भारतमा ?
अभिनेत्री नीता ढुंगाना ज्योतिष हरिहरको प्रेममा चुर्लुम्मः डेटिङका लागि भारतमा ?
गसिप– नेपाली फिल्म क्षेत्र गसिपका एउटा राम्रो वजार हो । कला क्षेत्रमा रहेकाहरुका बारेमा विभिन्न किसिमका गसिप बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी हुने भनेको कलाकारको प्रेम र सम्बन्धका बारेमा हो । कलाकारको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा सर्वसाधारणलाई धेरै चासो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्तो गसिप धेरै चर्चीत हुन्छन् ।
हप्तै पिच्छे आउने यस्तो गसिप कति सत्य हुन्छ त कति हल्ला मात्र हुन्छ । नायीका निता ढुंगानाको प्रेमको फेरी चर्चा हुन थालेको छ । अहिले उनको प्रेमको चर्चा चर्चीत ज्यातीष हरिहर अधिकारीका साथमा रहेको छ ।उनी नायकको रूपमा पनि देखिएका छन् ।
नायीका नीता यतिबेला भारतमा छन् । उनी एउटा फिल्मका लागि भारत गएको बताइएको छ । तर यता एकाएक केही दिन यता ज्योतिष हरिहर अधिकारी पनि हराएका छन् । हराएका हरिहरले एक दिन सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर पोष्ट गरे त्यसमा उनले जुन चश्मा लगाएका छन् त्यही चश्मा लगाएको अर्को तस्बिर नीता ढुंगानाले पनि पोष्ट गरिन् । यहि तस्बिरको आधारमा अहिले उनीहरुसंगै रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
साथै चैतमा जन्मदिन रहेका हरिहरलाई नीताले भ्यालेन्टाइन डे को दिन दुई जनाको तस्बिर राखेर जन्मदिनको शुभकामना दिएकी थिइन् ।
मान्छे गाडिएको आशंकापछि खोजी गर्दा जे भेटियो प्रहरी नै चकित !
यी ५ राशि भएका महिला हुन्छन् अधिक चलाख र बुद्धिमान
उर्लाबारी प्रकरणः यस्तो छ प्रवीण बास्तोलाको मृत्युको फेहरिस्त